Ndị na -echekwa ihe na ndị na -ebubata Antioxidants na ụlọ ọrụ | Ndị nchekwa China na ndị na -emepụta antioxidants
Nkọwa: granules na -acha ọcha, ntụ ntụ kristal ma ọ bụ flakes. Enweghị isi ma ọ bụ nwee ntakịrị isi nke benzoin. Anụ na ikuku. Na -agbaze ngwa ngwa na mmiri (53.0g/100ml, 25 ℃). Soluble na ethanol (1.4g/100ml) .pH nke ihe ọqueụqueụ mmiri bụ 8. Nguzogide ya nke ịgba ụka na sterilizability adịghị ike karịa nke benzoic acid. Mgbe pH dị na 3.5, ihe ngwọta 0.05% nwere ike iguzogide uto yist kpamkpam. Mgbe pH dị na 6.5, mkpa karịa 2.5% chọrọ. Na -eji: Nchekwa; onye nnọchi anya biocide. 1 ....
Vitamin c ntụ ntụ ascorbic acid
Nkọwapụta nkọwapụta: GB14754-2010, BP/EP/CP/USP/E300/FCC7 Nkwakọ ngwaahịa: 25KG/katọn teknụzụ nka (TDS) nke Ascorbic Acid (Vitamin C) Ngwaahịa: C Ascorbic Acid aha Chemical: (5R) -5 -[(1S) -1,2-dihydroxyethyl] -3,4-dihydroxfuran-2 (5H) -onye usoro kemịkalụ: C6H8O6 Ibu Molekụla: 176.1 Ọdịdị: Ọcha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọcha, ntụ ntụ kristal ma ọ bụ kristal na-enweghị agba, na-aghọ ihe na-acha odo odo na ikpughe na ikuku na iru mmiri. Solubility: A na -agbaze nke ọma na mmiri, na -agbachapụ nke ọma na ethanol (96%). Meltin ...
Ngwugwu 25kg/akpa ma ọ bụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Mbupu Site n'oké osimiri/onye na -ezi ozi/ikuku Echekwara ya na ebe dị jụụ. Debe akpa ahụ ma chekwaa ya na ebe kpọrọ nkụ, ikuku. Sodium dehydroacetate bụ onye na -ahụ maka ọnụnọ nje nwere oke nchekwa, oke ọnụnọ ọnụnọ ọnya ọnya na ike mgbochi nje. Acidity na alkalinity nri anaghị emetụta ya, ọ nwere ike idobe mmetụta antibacterial dị elu n'okpuru ọnọdụ akwụkwọ acidic ma ọ bụ obere alkaline. Ọgwụ antibacterial ya bụ ...
Nisin bụ ihe nchekwa nri nke ama ama n'ụwa niile.N'ihi na Nisin (nke a makwaara dị ka Streptococcus lactic peptide) bụ polypeptide, ọ na-agbari ngwa ngwa n'ime eriri afọ ya site na enzymes nri mgbe ọ risịrị, ule micro-biological sara mbara egosighi ihe ọ bụla. obe na -eguzogide. Nisin nwere ọrụ antimicrobial megide ọtụtụ nje bacteria na-enwe gram na spores ha nke na-ebute mmebi nri, ọkachasị na-egbochi bacilli na-eguzogide okpomọkụ, dị ka B. Stearother ...
Diacetate sodium bụ kristal na -esi ísì ụtọ acetic acid, dị mfe ịmịkọrọ mmiri, na -agbaze nke ukwuu na mmiri, na -ekpo oke ọkụ ka ọ dị elu karịa 150 Celsius, na -enwu ọkụ, na -akwụsi ike n'okpuru ọnọdụ oyi na nkụ. Sodium diacetate na -adaberekarị na acetic acid mebiri emebi nwere mmetụta antibacterial, nke nwere ikike mgbochi dị mma megide nje na ebu. Sodium diacetate bụ nke ihe ADI a na -akọwaghị, US FDA wepụtara ya dị ka ihe GRAS. Sodium diacetate bụ molecule ...
Ọnụ ego Calcium Acetate dị ka ihe mgbakwunye nri bụ kristal na-acha ọcha, granules ma ọ bụ ntụ ntụ. Obere acidodor. Ntakịrị ilu. Ọ na -esiri mmiri ike. N'okpuru 150 ° C anaghị efufu mmiri niile, dị ka okpomoku ruo 160 Celsius, ndakpọ n'ime acetone na ayodiin, calcium. Soluble na mmiri, ntakịrị soluble na ethanol. 0.2mol/L mmiri mmiri pH 7.3. Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu Mbukota: 25kg juru n'ọnụ na mpempe akwụkwọ, katọn, akpa. Mbupu: EMS, DHL, Site n'oké osimiri, wdg. Dika mkparita uka 1. Calcium ...
Nkwakọ ngwaahịa sodium Erythorbate 25KG/ katọn Nchekwa sodium Erythorbate na-edebe nkụ dị ala ma zere ìhè anyanwụ Sodium Erythorbate bụ ntụ ntụ ọcha kristal, nnu nnu. Ọ kwụsiri nnọọ ike n'ikuku n'ime ala kpọrọ nkụ. Mana na ngwọta, ọ ga -aka njọ n'ihu ikuku, Chọpụta ọla, okpomọkụ na ọkụ. Ebe na -agbaze karịa 200 ℃ (mbibi). Na -agbaze ngwa ngwa na mmiri (17g / 100m1). Ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbari na ethanol. Uru pH nke ihe ngwọta mmiri nwere 2% bụ 5.5 ruo 8.0. Eji ya mee nri ...
ọcha kristal granules ma ọ bụ crystalline ntụ ntụ. enweghị isi; nwere hygroscopicity, dị mfe soluble na mmiri, anaghị agbaze na mmanya. Nkwakọba nke Calcium propionate: 25kg kwa akpa kraft 17MT/20'FCL na -enweghị pallet. (ntụ ntụ) ụgbụ 14mt kwa 20'FCL nwere pallet. (ntụ ntụ) ụgbụ 20mt kwa 20'FCL na -enweghị pallet. (granule) net 16mt kwa 20'FCL nwere pallet. (granule) Nchekwa na njem nke Calcium propionate: Echekwara na ụlọ nkwakọba ihe kpọrọ nkụ, nke siri ike ma dị ọcha; chebe megide iru mmiri na kpo oku; zere arti arti ...
Nkọwa Sodium Lactate 867-56-1,72-17-3 bụ nnu sodium nke L (+) lactic acid na-emepụta site gbaa ụka. Ọ bụ ihe doro anya, hygroscopic na syrupy. Edebere sodium lactate na Europe ka ọ bụrụ mgbakwunye nri yana ntụaka E325. Ngwaahịa a na -akwado nkọwapụta akwụkwọ nri kemịkalụ nri (FCC V). Njirimara anụ ahụ-kemịkal aha Chemical 2-Hydroxypropanoic acid, monosodium nnu Molecular Weight 112.06 g/mol Molecular Formula C3H5O3 Na Ndebanye aha ...
Ihe oriri Sodium Succinate Dibasic/Disodium Succinate
Ihe mgbakwunye Sodium Succinate Dibasic/Disodium Succinate Disodium succinate, nke a na -akpọ WSA, nke a na -akpọkarị scallop, bụ ihe na -esi ísì ụtọ nke a na -ejikarị eme ihe n'oge. A na -ahụkarị ya na nri mmiri dị ka azụ azụ, oporo, na nshịkọ, ọ na -arụkwa ọrụ dị mkpa na ụtọ dị ụtọ nke ụdị nri a. Na mgbakwunye, disodium succinate dịkwa na osisi ndị ọzọ, dị ka olu. Ụkpụrụ ịdị ọcha ihe mgbakwunye nri nke China kwuru na enwere ike iji ya mee ihe. Disodium s ...